နေ့စဉ်မိုးလေဝသသတင်း. (၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ (၇)ရက်နေ့ ည(၇:၀၀)နာရီအချိန် ထုတ်ပြန်ချက်) - Cele Platform
နေ့စဉ်မိုးလေဝသသတင်း. (၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ (၇)ရက်နေ့ ည(၇:၀၀)နာရီအချိန် ထုတ်ပြန်ချက်)
ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အ‌ခြေအနေ။ ကပ္ပလီပင်လယ်ပြင်နှင့် ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့တွင် မုတ်သုံလေ အားအနည်းငယ်မှ အားအသင့်အတင့် ရှိနေပါသည်။
မနက်ဖြန်မွန်းတည့်ချိန်အထိခန့်မှန်းချက်။ ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း)နှင့် ကယားပြည်နယ်တို့တွင် နေရာ ကွက်ကျား၊ နေပြည်တော်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်း၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မကွေးတိုင်း ဒေသကြီး၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးနှင့် ရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်းနှင့် အရှေ့ပိုင်း)တို့တွင် နေရာကျဲကျဲ၊ ရန်ကုန် တိုင်းဒေသကြီး၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ကရင်ပြည်နယ်နှင့် မွန်ပြည်နယ်တို့တွင် နေရာစိပ်စိပ်နှင့် ကျန် တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်တို့တွင် နေရာအနှံ့အပြား မိုးထစ်ချုန်းရွာပြီး၊ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် နေရာကွက် ၍ မိုးကြီးနိုင်ပါသည်။ ရွာရန်ရာနှုန်းပြည့် ဖြစ်ပါသည်။
မြန်မာ့ပင်လယ်ပြင်။ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်၊ ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက်နှင့် ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့တွင် လှိုင်း အသင့်အတင့်ရှိမည်။ ကျန်မြန်မာ့ပင်လယ်ပြင်တွင် လှိုင်းအနည်းငယ်သာ ရှိမည်။ လှိုင်းအမြင့်မှာ မြစ်ဝကျွန်း ပေါ်၊ ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက်နှင့် ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့တွင် (၄)ပေမှ (၆)ပေခန့်နှင့် မုတ္တမကွေ့၊ မွန်- တနင်္သာရီကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက်နှင့် ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့တွင် (၃)ပေမှ (၄)ပေခန့် ရှိနိုင်ပါသည်။
နောက်(၂)ရက်အတွက်ခန့်မှန်းချက်။ ကပ္ပလီပင်လယ်ပြင်နှင့် ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းတို့တွင် မုတ်သုံလေ အားအသင့်အတင့် ရှိနိုင်ပါသည်။
နေပြည်တော်နှင့်အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်မနက်ဖြန်မွန်းတည့်ချိန်အထိခန့်မှန်းချက်။ နေရာကွက်ကျား မိုး ထစ်ချုန်း ရွာမည်။ ရွာရန်ရာနှုန်း(၈၀) ဖြစ်ပါသည်။
ရန်ကုန်မြို့နှင့်အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်မနက်ဖြန်မွန်းတည့်ချိန်အထိခန့်မှန်းချက်။ နေရာကွက်ကျား မိုး ထစ်ချုန်း ရွာမည်။ ရွာရန်ရာနှုန်းပြည့် ဖြစ်ပါသည်။
မန္တလေးမြို့နှင့်အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်မနက်ဖြန်မွန်းတည့်ချိန်အထိခန့်မှန်းချက်။ နေရာကွက်ကျား မိုး ထစ်ချုန်း ရွာမည်။ ရွာရန်ရာနှုန်း(၈၀) ဖြစ်ပါသည်။
လာမည့်စနေ၊ တနင်္ဂနွေအားလပ်ရက်များအတွက် မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်။ နေပြည်တော်နှင့် မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီးတို့တွင် နေရာကျဲကျဲနှင့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတွင် နေရာစိပ်စိပ် မိုးထစ်ချုန်းရွာနိုင်ပါသည်။ မိုး/ဇလ
ဘင်ျဂလားပငျလယျအျောအ‌ခွအေနေ။ ကပ်ပလီပငျလယျပွငျနှငျ့ ဘင်ျဂလားပငျလယျအျောတို့တှငျ မုတျသုံလေ အားအနညျးငယျမှ အားအသငျ့အတငျ့ ရှိနပေါသညျ။
မနကျဖွနျမှနျးတညျ့ခြိနျအထိခနျ့မှနျးခကျြ။ ရှမျးပွညျနယျ(တောငျပိုငျး)နှငျ့ ကယားပွညျနယျတို့တှငျ နရော ကှကျကြား၊ နပွေညျတျော၊ စဈကိုငျးတိုငျးဒသေကွီးအောကျပိုငျး၊ မန်တလေးတိုငျးဒသေကွီး၊ မကှေးတိုငျး ဒသေကွီး၊ ပဲခူးတိုငျးဒသေကွီးနှငျ့ ရှမျးပွညျနယျ(မွောကျပိုငျးနှငျ့ အရှပေို့ငျး)တို့တှငျ နရောကြဲကြဲ၊ ရနျကုနျ တိုငျးဒသေကွီး၊ ဧရာဝတီတိုငျးဒသေကွီး၊ ကရငျပွညျနယျနှငျ့ မှနျပွညျနယျတို့တှငျ နရောစိပျစိပျနှငျ့ ကနျြ တိုငျးဒသေကွီးနှငျ့ ပွညျနယျတို့တှငျ နရောအနှံ့အပွား မိုးထဈခြုနျးရှာပွီး၊ ရခိုငျပွညျနယျတှငျ နရောကှကျ ၍ မိုးကွီးနိုငျပါသညျ။ ရှာရနျရာနှုနျးပွညျ့ ဖွဈပါသညျ။
မွနျမာ့ပငျလယျပွငျ။ မွဈဝကြှနျးပျေါ၊ ရခိုငျကမျးရိုးတနျးတဈလြှောကျနှငျ့ ကမျးလှနျပငျလယျပွငျတို့တှငျ လှိုငျး အသငျ့အတငျ့ရှိမညျ။ ကနျြမွနျမာ့ပငျလယျပွငျတှငျ လှိုငျးအနညျးငယျသာ ရှိမညျ။ လှိုငျးအမွငျ့မှာ မွဈဝကြှနျး ပျေါ၊ ရခိုငျကမျးရိုးတနျးတဈလြှောကျနှငျ့ ကမျးလှနျပငျလယျပွငျတို့တှငျ (၄)ပမှေ (၆)ပခေနျ့နှငျ့ မုတ်တမကှေ့၊ မှနျ- တနင်ျသာရီကမျးရိုးတနျးတဈလြှောကျနှငျ့ ကမျးလှနျပငျလယျပွငျတို့တှငျ (၃)ပမှေ (၄)ပခေနျ့ ရှိနိုငျပါသညျ။
နောကျ(၂)ရကျအတှကျခနျ့မှနျးခကျြ။ ကပ်ပလီပငျလယျပွငျနှငျ့ ဘင်ျဂလားပငျလယျအျောတောငျပိုငျးတို့တှငျ မုတျသုံလေ အားအသငျ့အတငျ့ ရှိနိုငျပါသညျ။
နပွေညျတျောနှငျ့အနီးတဈဝိုကျအတှကျမနကျဖွနျမှနျးတညျ့ခြိနျအထိခနျ့မှနျးခကျြ။ နရောကှကျကြား မိုး ထဈခြုနျး ရှာမညျ။ ရှာရနျရာနှုနျး(၈၀) ဖွဈပါသညျ။
ရနျကုနျမွို့နှငျ့အနီးတဈဝိုကျအတှကျမနကျဖွနျမှနျးတညျ့ခြိနျအထိခနျ့မှနျးခကျြ။ နရောကှကျကြား မိုး ထဈခြုနျး ရှာမညျ။ ရှာရနျရာနှုနျးပွညျ့ ဖွဈပါသညျ။
မန်တလေးမွို့နှငျ့အနီးတဈဝိုကျအတှကျမနကျဖွနျမှနျးတညျ့ခြိနျအထိခနျ့မှနျးခကျြ။ နရောကှကျကြား မိုး ထဈခြုနျး ရှာမညျ။ ရှာရနျရာနှုနျး(၈၀) ဖွဈပါသညျ။
လာမညျ့စနေ၊ တနင်ျဂနှအေားလပျရကျမြားအတှကျ မိုးလဝေသခနျ့မှနျးခကျြ။ နပွေညျတျောနှငျ့ မန်တလေးတိုငျး ဒသေကွီးတို့တှငျ နရောကြဲကြဲနှငျ့ ရနျကုနျတိုငျးဒသေကွီးတှငျ နရောစိပျစိပျ မိုးထဈခြုနျးရှာနိုငျပါသညျ။ မိုး/ဇလ